1 Samuel 22 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
22 Enti Dawid fii hɔ,+ na oguan+ kɔɔ Adulam+ ɔbodan+ no mu, na ne nuanom ne ne papa fie nyinaa tee, na wosian kɔɔ ne nkyɛn wɔ hɔ. 2 Na mmarima a wɔn ho akyere+ wɔn nyinaa ne wɔn a wɔdede aka+ nyinaa ne wɔn a nsɛm ahyɛ wɔn so+ nyinaa boaboaa wɔn ho ano kɔɔ ne nkyɛn,+ na ɔyɛɛ wɔn so panyin.+ Mmarima bɛyɛ ahanan na wɔkɔkaa ne ho. 3 Akyiri yi, Dawid fii hɔ kɔɔ Mispe wɔ Moab, na ɔka kyerɛɛ Moab+ hene sɛ: “Mesrɛ wo, ma me papa ne me maame+ mmɛtena mo nkyɛn nkosi sɛ mehu nea Onyankopɔn bɛyɛ me.” 4 Enti ɔde wɔn tenaa Moab hene nkyɛn, na wɔne no tenae nna a Dawid te beae a ɛhɔ kɔ yɛ den+ no nyinaa. 5 Ɛnna odiyifo Gad+ ka kyerɛɛ Dawid sɛ: “Nkɔ so ntena beae a ɛhɔ kɔ yɛ den no. Fi hɔ na kɔ Yuda asase so.”+ Enti Dawid siim kɔɔ Heret kwae mu. 6 Na Saul tee sɛ wɔahu baabi a Dawid ne mmarima a wɔka ne ho no wɔ. Ná Saul te Gibea, tamarisk+ dua no ase wɔ sorɔnsorɔmmea hɔ kura ne peaw+ ne nsam, na ne nkoa nyinaa gyinagyina ne ho. 7 Ɛnna Saul ka kyerɛɛ ne nkoa a wogyinagyina ne ho no sɛ: “Mo Benyaminfo, muntie ɛ. So Yese ba+ no nso bɛmema mo nyinaa mfuw ne bobe nturo?+ Ɔbɛyɛ mo nyinaa apem apem so ahwɛfo+ ne ɔha ha so ahwɛfo anaa? 8 Mo nyinaa moabɔ me ho pɔw. M’ankasa me ba ne Yese ba no ayɛ apam,+ na obiara anyi me asotiw,+ na obiara nni hɔ a odwen me ho a obeyi me asotiw sɛ m’ankasa me ba ama m’akoa so atia me ma wakɔtɛw me nnɛ a merekasa yi.” 9 Ɛnna Edomni Doeg+ a wɔde no asi Saul nkoa so no buae sɛ: “Mihui sɛ Yese ba no baa Ahitab+ ba Ahimelek+ nkyɛn wɔ Nob. 10 Obisaa+ Yehowa maa no, na ɔmaa no aduan,+ na ɔde Filistini Goliat nkrante+ maa no.” 11 Ɛhɔ ara na ɔhene somae sɛ wɔnkɔfrɛ Ahitab ba ɔsɔfo Ahimelek mmra, ɔne ne papa fie nyinaa, asɔfo a wɔwɔ Nob+ no. Enti wɔn nyinaa baa ɔhene anim. 12 Ɛnna Saul kae sɛ: “Ahitab ba, mesrɛ wo tie!” Na ɔkae sɛ: “Mini, me wura.” 13 Na Saul ka kyerɛɛ no sɛ: “Dɛn nti na moabɔ me ho pɔw,+ wo ne Yese ba no, na womaa no aduan ne nkrante, na wubisaa Onyankopɔn maa no, sɛ ɔnsɔre ntɛw me nnɛ a merekasa yi?”+ 14 Ɛnna Ahimelek buaa ɔhene sɛ: “Wo nkoa nyinaa mu no, hena na ɔte sɛ Dawid,+ ɔnokwafo+ a ɔyɛ ɔhene sew+ ne w’awɛmfo so panyin a wodi no ni wo fie?+ 15 Ɛnnɛ na merefi ase abisa+ Onyankopɔn ama no anaa? Ɛmpare me! Mma ɔhene mmfa asɛm bi nnto n’akoa ne me papa fie nyinaa so, na eyi nyinaa, ketewaa oo, kɛse oo, w’akoa nnim ho hwee.”+ 16 Nanso ɔhene kae sɛ: “Ahimelek, owu na wubewu,+ wo ne wo papa fie nyinaa.”+ 17 Ɛnna ɔhene ka kyerɛɛ mmirikatufo+ a wogyinagyina ne ho no sɛ: “Monnan mo ho nkum Yehowa asɔfo no, efisɛ wɔne Dawid adi nsawɔso; wohui sɛ ɔreguan nanso wɔanyi me asotiw!”+ Na ɔhene nkoa no ampɛ sɛ wɔteɛ wɔn nsa ka Yehowa asɔfo no tow hyɛ wɔn so.+ 18 Afei ɔhene ka kyerɛɛ Doeg+ sɛ: “Dan wo ho na tow hyɛ asɔfo no so!” Ɛhɔ ara na Edomni+ Doeg dan ne ho tow hyɛɛ asɔfo no so. Ɛda no, okunkum+ mmarima aduɔwɔtwe anum a wɔhyehyɛ nwera asɔfotade.+ 19 Asɔfo no kurow Nob+ mpo, ɔde nkrante kunkum emu nnipa; ɔde nkrante kunkum mmarima ne mmea, mmofra ne nkokoaa, anantwi ne mfurum ne nguan. 20 Nanso Ahitab ba Ahimelek ba biako a wɔfrɛ no Abiatar+ nyaa ne ho tetewee, na oguan kodii Dawid akyi. 21 Na Abiatar ka kyerɛɛ Dawid sɛ: “Saul akunkum Yehowa asɔfo no.” 22 Ɛnna Dawid ka kyerɛɛ Abiatar sɛ: “Ɛda no,+ na Edomni Doeg wɔ hɔ, enti na minim sɛ nea ɛte biara, ɔbɛka akyerɛ Saul.+ Me na mayɛ wo papa fie akra nyinaa bɔne. 23 Wo de, tena me nkyɛn. Nsuro, na obiara a ɔhwehwɛ me kra no hwehwɛ wo nso kra, na wuhia sɛ mebɔ wo ho ban.”+